सिकिस्त बिरामी नै छाडेर जब चिकित्सकहरु काठमाडौंको सडकमा उत्रिए | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
काठमाडौँ । सिकिस्त बिरामी नै छाडेर जब चिकित्सकहरु काठमाडौंको सडकमा उत्रिए चिकित्सा विधेयक तथा स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग राखेर डा. गोविन्द केसी २० दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेका छन् । जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरमा २० दिन आमरण अनशनमा बसेका डा. केसीको पक्षमा देशभरका चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
आकस्मिकबाहेक सेवा ठप्प पारेर देशभरका चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा चिकित्सकहरु स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
यसैक्रममा काठमाडौंका चिकित्सकहरु पनि अस्पताल परिसरमा प्रदर्शन गर्दै माइतीघर मण्डलामा समेत पुगेका थिए । उनीहरुलाई विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता, प्राध्यापक तथा विभिन्न संघ संस्थामा व्यक्तिहरुले साथ दिएका थिए । सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका उनीहरुले डा. केसीको माग पूरा गर्दै उनको जीवन रक्षाको माग समेत गरेका छन् । माइतीघरबाट निकालेको जुलुश नयाँ बानेश्वरसम्म पुगेको थियो ।
समाचारसिकिस्त बिरामी नै छाडेर जब चिकित्सकहरु काठमाडौंको सडकमा उत्रिए